Samachar Batika || News from Nepal » यसरी सुरु भएको थियो हिन्दु धर्ममा गोत्रको , तपाईको कुन जान्न पुरा पढ्नुहोस ?
यसरी सुरु भएको थियो हिन्दु धर्ममा गोत्रको , तपाईको कुन जान्न पुरा पढ्नुहोस ?
सनातन धर्ममा गोत्रको धेरै महत्व हुन्छ । ‘गोत्र’को शाब्दिक अर्थ त धेरै मै व्यापक हुन्छ । यद्यपि विद्वानहरुले वेला-वेलामा यसरबारे यथोचित सहि व्यख्या गरेका छन् ।
‘गो’ अर्थात् इन्द्रिय, र ‘त्र’ आशय हुन्छ ‘रक्षा गर्नु’ । यसर्तः गोत्रको एक अर्थ ‘इन्द्रिय आघातबाट रक्षा गर्नु वा बॅचाउनु’हो जसको प्रष्ट संकेत ‘ऋषि’ को तर्फ हुन्छ ।
सामान्यतया ‘गोत्र’ शब्द रृषि परम्परासँग सम्’बन्धित मानिन्छ । ब्राह्मणाका लागि ‘गोत्र’ विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने ब्राह्मणहरु ऋषिका सन्तान मानिन्छन् । जसअनुसार प्रत्येक ब्राह्मणको सम्बन्ध ऋषिकूलसँग हुन्छ ।
प्राचीन कालमा चार जना ऋषिका नामबाट गोत्र पराम्परा सुरु भएको मानिन्छ । ति ऋषि हुन्, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ र भगु । केही समय पश्चात क्रमस जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र तथा अगस्त्य पनि त्यसमा थपिए । व्यावहारिक रूपमा ‘गोत्र’ को आशय पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । जो ब्राह्मणहरुका लागि उनीहरुको ऋषिकुलसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
कालान्तरमा जब वर्ण व्यवस्थाले जाति–व्यवस्थाको रूप लियो त्यसपछि यो पहिचान स्थान तथा कर्मसँग पनि सम्बन्धित हुन पुग्यो । यही कारणको हो कि ब्राह्मणका अलावा अन्य जातिको गोत्र उनीहरुको उ’द्गम स्थान या कर्मक्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
‘गोत्र’ को पछाडिको मूख्य भाव भनेको एकत्रीकरण हो । यद्यपि वर्तमान समयमा आपसी प्रेम र सौहार्दताको कमीका कारण गोत्रको महत्व पनि विस्तारै कम हुँदै गएर केवल कर्मकाण्डी औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ ।
ब्राह्मणमध्ये यदि कसैलाई आफ्नो ‘गोत्र’को जानकार हुँदैन भने कुनै धार्मिक कर्म गर्दा उनको गोत्र ‘कश्वप’ भनेर उच्चारण गरिन्छ । यस्तो किनभने कश्यप ऋषिका एकभन्दा धेरै जना संग विवाह गलेका थिए र उनको धेरै पुत्रहरु थिए ।
त्यसैले यदि कुनै ब्राह्मणलाई आफ्नो गोत्रको ज्ञान हुँदैन भने उनलाई ‘कश्यप’ ऋषिकूलको मानिन्छ । त्यसैले उनको गोत्र कश्वप भनेर उच्चारण गरिन्छ वा वोलाईन्छ ।
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार ०९:१७